Hkakaborazi | Climb O'Clock
Category Archives: Hkakaborazi
“”” Ye Min Thu “””””ခါကာဘိုတောင်ထိပ်ကို နောက်ထပ်ဘယ်သူခြေချနိုင်အုံးမယ်ထင်လဲ Nyi Nyi Aung Doelone ခုတက်တဲ့ အမေ၇ိကန်ရော ဂျပန်ပါ မရောက်ဘူးဆိုတော့လေ “”””””” အပေါ်က မေးခွန်းက ကိုရဲမင်းသူ က ကျွန်တော့ရဲ့ post တစ်ခုအောက်မှာမေးထားတဲ့ မေးခွန်းပါ ( ကိုရဲမင်းသူဟာ မြန်မာ-ဧဝရတ် တောင်တက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၊ လတ်တလော ခါကာဘိုရာဇီ ပျောက်ဆုံးတောင်တက်သမားနှစ်ဦးကယ်ဆယ်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှာတောင်ပေါ်ထိ လိုက်လံရှာဖွေပါဝင်ခဲ့တယ် ၊ နီပေါက မီတာ ၆၀၀၀ကျော် IslandPeak/ImjaTse တို့ကိုတက်ထားပြီး မနှစ်က ဂမ်လန်ရာဇီ အခြေခံစခန်းအဖွဲ့မှာလည်းပါဝင်ခဲ့သူမို့ သူ့မေးခွန်းကို … Continue reading →
Posted on May 31, 2014	by climberdoelone
Mt.Khakaborazi (5881 meters )is the “Highest Mountain in Myanmar***” Location & Environment : It is located in “Khakaborazi National Park” in Naungmung Township of Kachin State. The nearest airport is Putao airport (which is 1127 miles from Rangoon/Yangon International Airport). The KKBo National … Continue reading →
Posted in Fact, History, Hkakaborazi, Mountaineering	| Tagged Climb O' Clock, Myanmar Climbing	| 1 Comment